A "render" ayaa u muuqda in la mid ah waxa iPhone LCD leh shaashad 6,1-inji noqon kara | Wararka IPhone
A "render" ayaa u muuqda taas oo jilaysa waxa iPhone LCD leh shaashad 6,1-inch u eg
Ruben gallardo | | Fikradaha iPhone
Maaha wax lala yaabo in - haddii aan waxba is beddelin - Apple ay soo saari doonto iPhones cusub bisha Sebtember ee soo socota. In kasta oo ay xaaladdan tahay, ma ahan oo keliya laba nooc ayaa la filayaa, laakiin waxaa jiray mala-awaal muddo bilooyin ah markii la yimid iPhone ah oo leh shaashad LCD ah oo u ekaysiin lahaa muuqaalka hadda jira ee iPhone X. Iyo, dabcan, oo leh qiimo aad loo hagaajiyay, oo aan raqiis ahayn.
Si hal talaabo loo qaado, waa moodel in la isu keeno dhammaan wararka xanta ah ee ku daadanaya internetka, samee liistada oo dhameystiran iyo iyaga ku dhaqmaan iyaga oo ku dayasho 3D ah. Xaaladdan oo kale sidoo kale waa lagu dhaqmay natiijadana waxaa lagu arki karaa labadaba sawirrada iyo fiidiyaha aan hoos ku soo lifaaqno.
Render-ka la bilaabay ayaa is tusinaya ama muujinaya waxa aad ka filan karto iPhone-kan oo leh shaashad LCD ah laakiin leh muuqaal iPhone X. Marka hore, isbeddelka ugu dambeynta badhanka «Guriga» ayaa sii socon doona. Xaqiiqdii, sawirada waxaad ka arki kartaa sida aad sharad ugu gali laheyd shaashad leh "caan" caan ah; taasi waa, qaabku wuxuu lahaan lahaa tikniyoolajiyadda Aqoonsiga Aqoonsiga.
Dhinaca kale, qaabkan cusubi wuu ka weynaan lahaa iPhone X -8,3 mm marka loo barbardhigo 7,7 mm loogu talagalay qaabka hadda jira-. Waxaan sidoo kale dib u heli doonnaa galaas taas waxaa lagu taageeri karaa wireless wireless, iyo sidoo kale maqnaanshaha muraayadaha laba-geesoodka ah ee kamaradda weyn iyo keenista moodal sida iPhone 8; hal shidma
Ugu dambeyntiina, sida aan soo sheegnay - iyo sida ay saadaalinayaan munaasabadda -, qiimaha kooxdan cusub ee LCD iPhone waxay lahaan lahayd qiimo aad u jaban. In kasta oo, iska jir, waxay noqon doontaa geesinimo inaad faallo ka bixiso inay jaban tahay: inta u dhexeysa isku shaandheynta ayaa u dhaxeysa 700 ilaa 800 oo doolar. Taasi waa, halkan Isbaanishka waxaan ku arki lahayn ilaa 800 euro in la beddelo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » Fikradaha iPhone » A "render" ayaa u muuqda taas oo jilaysa waxa iPhone LCD leh shaashad 6,1-inch u eg